“Dawladdeenu waxay ka baratay Jab baan la maagganahay..Waar inaga socon-mayso.” | Somaliland.Org
“Dawladdeenu waxay ka baratay Jab baan la maagganahay..Waar inaga socon-mayso.”
November 28, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Sheekh Aadan Maxamuud Xiirey (Aadan-Siiro), ayaa baaq iyo talooyin u jeediyay Madaxweyne Rayaale iyo Axsaabta Mucaaradka ah. Waxaanu Axsaabta Mucaaradka ah ugu baaqay inay midkooda wax qabanaya soo horraysiiyaan oo midkooda xun reebaan.
Sheekh Aadan-Siiro oo Salaaddii Ciidda ee shalay ka dib, khudbad u jeediyay dadweynihii ku tukanayay Garoonka Xawaadle ee Magaalada Hargeysa, ayaa si faahfaahsan uga hadlay Xaaladda Siyaasadeed ee dalka iyo duruufaha dhaqaale ee dadka ku gedaaman. Waxaanu ka hadlay aragtiyaha Kooxda Al-Shabaab ee Koonfurta Soomaaliya oo uu mar kale ka digay.
Sh. Aadan-Siiro ayaa mar uu la hadlayay Axsaabta Mucaaradka ah wuxuu kula dardaarmay inay iska jiraan khilaaf, waxaanu ugu baaqay inay soo hormariyaan tartanka midkooda dadka wax u qabanaya, waa sida uu yidhiye, “Waxaanu leenahay in badan bay dadku gacanta Magaciina ku hayeen, waxaanu aad uga xunnahay iyaga oo dad badani u dhinteen Magaciina, in aad tidhaahdeen Hargeysa, Burco iyo Ceerigaabo ha la dumiyo dagaalkii aynu la galnay Taliskii Afweyne. Taladii baa laydinkala wareegay oo Innamo badan baa ku naafoobay, dad badan baa ku dhintay. Intaas oo Agoomood baa inagu samaysmay. Haddaad doonaysaan in aad isbedel samaysaan, waxa laydiinka baahan yahay Midnimo.” Sidaa waxa yidhi Sh. Aadan Maxamuud Xiirey (Sh. Aadan-Siiro) oo ka mid ah Culimada Somaliland oo sheegay in dalku uu ku jiro waqti isbedel, isla markaana loo baahan yahay in aan la bedelin Magac iyo Qabiil toona ee Mucaaradku midkooda wanaagsan ee dalka wax u qabanaya soo qaddimaan. Waar Axsaabta Mucaaradka aheey Khilaafka iska yareeya. Waar umaddu in badan bay dhiig badan idinku bixisay oo Magacyadiina kor u qaadday ee rejadooda ha baabi’inina. Waar idinku ka midooba waxaad Umadda u qabanaysaan, oo kiina wanaagsan soo qaddima, kiina xun ee aan Umadda waxba u qabanaynin, waayo dadku waxay doonayaan isbedel.” Ayuu yidhi Sheekhu, waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Dal baynu abuurnay Jamhuuriyadda Somaliland la yidhaahdo oo qaddiyaddeenu maaha Qabiil. Runtii, Qabaa’il baynu nahay iyo Beelo isu-yimi, laakiin waxay Umaddu doonaysaa cadaalad, horumar, shaqo iyo in meel wanaagsan loo higsado. Taasi ciddii ka saaraysay ee Umaddu ku kalsoonayd ee isbedel keenaysay, ayaa loo baahan yahay. Haddii Reer lagu bedelayo reer ama Magac lagu bedelayo Magac, isbedelkaasi ka aanu u socono maaha. Ka dadka wanaagsani dhiirgelinayo maaha.”
Mar uu Sh. Aadan ka hadlayay isbedelka iyo aragtida Islaamka, ayaa wuxuu yidhi, “Islaamku afar isbedel buu yaqaanaa; wixii wax ka wanaagsan, waa ka ugu wanaagsan. Wixii wax inyar ka wanaagsani waa ka labaad. Wixii wax la mid ah, maya. Wixii wax ka xun maya. Afartaa isbedel ayuun baa la doonayaa.”
Sheekhu wuxuu saddexda Hoggaamiye Siyaasadeed ee Somaliland ee Madaxweyne Rayaale, Guddoomiyaha KULMIYE Axmed-Siilaanyo iyo Guddoomiyaha UCID Faysal Cali Waraabe ku sifeeyay saddex Nin oo Indho la’ oo midba dhinac ka taagan yahay Maroodi, kuwaas oo mid waliba siday ula muuqatay ku sifeeyay Maroodigii. “Waxaan Umadda reer Somaliland u sheegayaa, saddexda Nin ee talada isku haya (M/weyne Rayaale iyo labada Guddoomiye Xisbi Mucaarad) waa saddex Nin oo Indho la’ oo Maroodi meel taagan ninba meel ka qabsaday. Ninkii Dhegta haystay waxa la waydiiyay Maroodiga ka waran, wuxuu yidhi, Maroodigu waa Masaf. Waa runtii oo halka uu haysto ayaa Masaf u eg, balse Maroodigu Masaf maaha ee Dhegtiisa ayaa ah. ninkii Lugta haystay ayaa la waydiiyay oo la yidhi ka waran, wuxuu yidhi Maroodigu waa Jidhif. Ma qaldana oo halka uu haysto oo Lugta ah ayaa Jirrid ah, laakiin Maroodigu maaha Jirrid. Ninkii Dhakada haystay ayaa la waydiiyay isna, wuxuu yidhi Maroodigu waa Dhul Ilaahay oo ballaadhan. Isaguna waa runtii oo dhakadii uu haystay ayaa ballaadhan. Waxaan idin leeyahay, inaga ayaa u gar-qaadayna oo waxaynu ugu gar-qaadaynaa caddaaladda iyo dalku wuxuu wax ku noqonayo.” Ayuu yidhi Aadan-Siiro.
Sheekh Aadan-Siiro wuxuu sheegay in ay dalka ka jiraan Dhalinyaro ku jira Masaajidada dalka oo u hanqal-taagaya dhaqamada Kooxda Al-Shabaab ee ka dagaallama Koonfurta Soomaaliya. Kuwaas oo uu baaq u jeediyay. Mar uu arrintaa ka hadlayayna wuxuu yidhi, “Waxaan la hadlayaa kuwa Somaliland ula baxay Gadh, una soo xidhay Khamiis, si ay u dumiyaan oo Shaadh Diineed isticmaalaya. Waxaan aad uga xumahay in ay maanta Masaajiddadeena ku jiraan dhalinyar ama dad u hanqal taagaya kuwa dadka laynaya ee ku laynaya wuu I khilaafay iyo wuu iga soo horjeedaa. Marka uu hadal yidhaahdana, odhanaya hadalkaygu waa hadalkii Ilaahay oo kale ama waa kuwii Rasuulka (CSW), ilaahay baynu ka magan-galnaye.” Waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Waar Rasuulkii Ilaahay baa la qabsan jiray oo dadka gar-bixin jiray ee ninka inta uu halkaas fadhiistay leh Umad baan Diin ku dhaqayaa oo inta uu dadka laayo, marka la yidhaahdo waar ka daa, odhanaya hadalkii Ilaahay baad khilaaftay. Kuwaasi way caddaysteen, laakiin kuwaan la hadlayaa waa kuwa Hargeysa, Borama, Laascaanood, Burco iyo Ceerigaabo jooga ee kuwaa hoosta kaga xidhan. Rag siduu yeelay in aad yeesho ayaa kuu qurux badan, intaad Hooyadaa, Aabahaa iyo Caruurtaada aad rabshi lahayd in aad tagto kuwa faranta dagaal leh ayaa kuu wanaagsan.”
Sheekh Aadan-Siiro wuxuu sheegay in Xukuumadda Somaliland tallaabo kasta oo looga baahan yahay inay ka qaaddo Arrinta afkaaraha la xidhiidha Al-Shabaab ay adeegsato aragti la macno ah, Jab baan la maaganahay. Waxaanu u jeediyay inay ka gudubto oo ay dalka wax u qabato. “Dawladdeenu runtii waxay ka baratay Jab baan la maagganahay. Waxa weeye, waa wada Dheg baa la yidhaahdaa oo wax walba waa la soconaa oo waanu ognahay bay yidhaahdaan, iyagana waxaan leeyahay waar inaga socon-mayso Jab baan la maaganahay. Dalkan dad badan baa duminaya oo aan jeclayn in aynu abuurno dal Jamhuuriyadda Somaliland la yidhaahdo, markaa waxaanu leenahay amnigoodii iyo shaqadoodii ha qabsadaan.”
Sheekhu wuxuu sheegay in dadka dalka ku dhaqani ay danyar yihiin, isla markaana loo baahan yahay in 20-Guri oo kastaaba ay samaystaan guddi taakulaysa inta ka mid ah ee taagta daran dhaqaale ahaan. Waxaanu dhaliil u jeediyay Beesha Caalamka oo ay ka mid yihiin dalalka Carabtu. “Walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa, dad jilicsan baynu nahay ee ha laysu gargaaro oo aad ha laysugu gargaaro. Waar dadkeenii way soo ooteen oo Jaararkii way bakhtiyayaan oo shaqo ma jirto ee intiina wax haysataay dadkiina u gargaara. Waxaynu haysano ha la qaybsado…waxa weeye, 20-kii guriba Guddi ha samaystaan oo gurigaa bakhtiyaya ama saddexdaa guri ee inagu dhex jira wax ha la taro. In badan baanu ka hadalnay oo dawladdii waad ogtihiin, Gaaladaa ay daba-yaacayaan wax alla wax aynu ka haynaa ma jirto. Ictiraaf kama hayno. Xamartaa maanta gubaanaysa ee laysku haysto Tiriiliyan-no ayay ku bixiyaan, dalkaa degan (Somaliland) wax alla wax ay gashadeen ma jirto. Kuwii aynu walaalaha ahayn ee aynu Muslimnimada ka midaysnayd ayaanay iyana jirin wax ay dalka gashadeen. Ilaahay baynu ku xidhanahay..Sanaaduuqda laga sameeyay Masaajiddada ha la taageero..haddii taa lagu dedaali waayana dhib badan baa ina gaadhaysa.” Ayuu yidhi Sheekh Aadan Siiro. Waxaanu dalka ugu duceeyay in uu nabadda ku adkeeyo, isla markaana wuxuu Ilaahay uga baryay in uu dalka u dooro dadka wanaagsan ee hoggaamin kara. “Ilaahow dad jilicsan baanu nahay, waqti isbedel baanu ku jirnaa oo waxba ma dooran karnee in aad dalka u doorto dadkii wanaagsanaa ee Shareecada iyo wanaagga ku hoggaamin lahaa..” ayuu intaa ku ladhay Sheekhu. Waxaanu u duceeyay guud ahaan Umadda Somaliland.
Gebo-gebadiina wuxuu Xukuumadda ugu baaqay in Doorashad la qabto waqtiga loo cayimo oo aanay dib-u-dhac mar kale dhicin, isla markaana wuxuu Komishanka ugu baaqay inay hawshooda si daacadnimo ah u gutaan.